मन्त्री रविन्द्र अधिकारी बुद्धको शरणमा, सिंहदरवारको तनाव कि अनुगमन ! – YesKathmandu.com
मन्त्री रविन्द्र अधिकारी बुद्धको शरणमा, सिंहदरवारको तनाव कि अनुगमन !
काठमाडौं । वाइडबडी भ्रष्टाचार प्रकरणमा निकै तनाव भोगेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री सचिवसहित लुम्बिनी पुगेका छन् । बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनी पुगेका मन्त्री अधिकारी र सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले ध्यान पनि गरेका छन् ।
सिंहदरवारको तनाव हटाउन सचिवसहित मन्त्री अधिकारी बुद्धको शरणमा लुम्विनी पुगेका होइन । लुम्बिनी अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको कार्य प्रगति हेर्न पुगेका हुन् । ६० प्रतिशतभन्दा बढि काम सम्पन्न भइसकेको लुम्बिनी अन्तराष्ट्रिय विमान स्थलमा तिव्र काम भइरहेको छ । मन्त्री अधिकारीले पनि लुम्बिनी अन्तराष्ट्रिय विमान स्थललाई आफ्नो प्रतिस्ठासँग जोडेका छन् ।
लुम्विनी पुगेका मन्त्री अधिकारीले बुद्धको मन्दिर अगाडी साधना पनि गरेका छन् । दुई हात जोडी आँखा चिम्लेर उनले ध्यान गरेका छन् । मन्त्री अधिकारीसँगै सचिव र अन्य मन्त्रालयका कर्मचारी पनि ध्यान गर्न पुगेका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिले मन्त्री अधिकारीलाई वाइडबडी बिमान खरिद प्रक्रियामा कमजोरी गरेको भन्दै नैतिक कारवाहीको सिफारिस गरेको छ । तर सचिव देवकोटा र वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई भने भ्रष्टाचारको कारवाही गर्न अख्तियारलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।